Yintoni endiyenzayo ngoluhlu lwamacandelo kwi-Amazon.com ukubeka inkqubela?
Xa kuziwa ekuthatheni inzuzo yokungahlawulanga imali i-Amazon.com kunye nenkokeli yokubeka phambili enenkqubela phambili, umgaqo-mfihlelo wempumelelo uhlanganiswe kumkhangeli wokukhangela umthengi ophilayo. Ndiyathetha ukuba uhlale phambili kumdlalo kwi - i-Amazon.com ngokubeka indawo ekubonweni phezulu kwinqanaba leemakethe - konke okufunekayo kukulungisa ngokupheleleyo uluhlu lwemveliso yakho. Kodwa inkohliso kukuba ukuba nakho konke okufunekayo kufuneka ukwazi ukuba yintoni kanye kwaye yenzani ngokukodwa xa uhambisa zonke izihlomelo zokuhlengahlengiswa. Nantsi indlela ongayenza ngayo - sebenzisa le khowudi elifutshane elilandelayo ukuba ube negxininiso elichanekileyo ukususela ekuqaleni, ngaphandle kokuchitha kwanomzuzu wexesha lakho elixabisekileyo okanye umgudu omncinci.
Ukubeka uluhlu kwi-Amazon
Ukuba sele udlala kakuhle ne-Search Engine Optimization (SEO), kufuneka ube nayo I-SEO ziphezulu zineemfuno zithi, umxholo uhlala uyinkosi. Ndiyathetha ukuba mhlawumbi nayiphi na imixholo yombhalo onokuyifumana kwiWebhu yinto eqhelekileyo eyenza ukulungiswa ngokuphumelelayo okufunekayo ukubonakala kwe-intanethi engcono. Yaye yonke into ehlelwe kakuhle ephendulekayo isuka kwisetyenziso esilumkileyo kunye nokubekwa ngokufanelekileyo kwegama eliphambili elijoliswe kuyo. Ngoko ke, ukuba ufuna ukubona uluhlu lwakho oluhle kakhulu kwi-i-Amazon.com kunye neenzuzo zakho zodidi oluzalwe ngesipuni sesiliva-ukuphatha uphando oluphambili lwegama elingundoqo kufuneka libe yinyathelo lakho elihamba phambili ngaphaya kwalo.
Ngoko-ke, makhe sijamelane nayo - ekukhetheni igama elingundoqo lenziwe ngokubaluleka kubaluleke kakhulu ukwenza ukuba uluhlu lwemveliso yakho lube phezu kwelo i-Amazon.com isoloko ibeka phezulu kwosesho oludlulileyo. Yingakho ukuqhuba uphando olunzulu lwegama eliphambili ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi, ndincoma ukusebenzisa esinye sezixhobo zokucinga ezilandelayo: I-Google Keyword Planner (uqale ngokuqala ngamaqela akhulileyo aphuma ngaphandle kwentlawulo kunye nethuba elihle kakhulu elifanelekileyo kwi-Pay-Per yakho elandelayo. -Chofoza umkhankaso), kunye namazwi omthengisi, i-AMZ Tracker, i-Scope, kunye negama eliphambiliTool.io (khetha nje okokuqala oyithandayo kakhulu, njengoko zonke izixhobo ezichazwe ).
Nawuphi na uhluko?
Kutheni ufanele uqale ngokukodwa ngeThuluzi eliCwangcisiweyo leNgcaciso ngelo likhulu lokukhangela kwehlabathi, kwaye kuphela ke uqhubeke ngokuthatha elinye, elingakumbi igama elingundoqo elingumncedisi? Kalula nje xa kufika kwi
IiNqaku eziPrayimari Iimpawu eziziiprayimari kunye ne-algorithm yazo, - zenzelwe ukuba ziboniswe ngokuthe ngqo kumbono ocacileyo, umzekelo, kwizihloko zemveliso, iinkcazo, iingongoma zebhulogi malunga nemveliso, njl.
Amagama angundoqo afihliweyo - akukho nonga-brainer ukuba le uluhlu lwamagama angundoqo aphila kwi-marketplace ye-Amazon.Akubeni bengabonakali kubathengi bemihlaba, kunye neenjini zokukhangela, amagama angundoqo afihliweyo esenza ilizwi lawo kwaye ancede uluhlu lwemveliso yakho lubekwe kakuhle kakhulu. I-slang yomthengisi kunye ngamanye amaxesha ngamagama angenakuphunyiswa ngamagama, asetyenziswe ngokubanzi njengegoggon yoshishino-ke ngoko ke le nxalenye yamagama angundoqo akunakwenzeka ukuba afakwe, umzekelo, kwizihloko ezisemthethweni.
Uluhlu lwe-Anatomy kwi Amazon.com ukuya kwiD Ukubeka Isisombululo Sakho
Xa igumbi lakho eliphambili legama elikhethiweyo lilungelekile, lixesha lokuba nezinto zonke zikhona kunye nekhasi lakho leenkcukacha. Kwaye isakhiwo esiyinhloko soluhlu lwekhasi lomkhiqizo esiya kukulungiselela luhlala luqulathe isethi efanayo yezinto ezibalulekileyo. Ukuqwalasela ukuba zenzelwe ukuzaliswa ngamagama aphambili ephambili ekujoliswe kuyo-okokuqala nokuphambili - nantsi yintoni efuna ukunyamekela kwakho ngqo.
Isihloko sokubhalisa esithintela isihloko esisemgangathweni semali yokuthengisa.
Amaphupha e-Bullet ahlinzeka ngemveliso ecocekileyo necacileyo kunye nokusebenzisa iziphakamiso.
Inkcazo yeMveliso eyenza ngokwenene imele ingcaciso ecacileyo yeBullet Points.
Iimifanekiso eziphambili ezisekela yonke imveliso ukubonelela ngento ebonakalayo ebonwa ngabathengi abaphilayo.
I-Amazon.com I-Promotion Promotion
Akukho mfuneko yokuthetha ukuba isihloko sesicatshulwa sakho semveliso mhlawumbi siyona ndawo ibaluleke ngaphezu kwayo efuna ukufakwa kunye neenkcukacha eziphambili eziphambili kunokwenzeka. Qaphela, nangona kunjalo, akufanele ube neenkcukacha zezinto ezikhethiweyo ezihlawulelwe ngamagama angundoqo. Ngoko, ukuqinisekisa ukuba isihloko sakho somkhiqizo sinengqiqo, yenza i-check-double check to have everything in place in the criteria:
Beka amagama angundoqo asekuqaleni ekuqaleni kokunciphisa umyalelo wokubaluleka.
Ubude besikhundla semveliso kuvunyelwe ukuba bufike kwiibali ezingama-200..Ngaloo ndlela kuphela kuwe ukugqiba ukuba kuya kuba lide kangakanani.
Yonke incwadi yokuqala yegama ngalinye letayitile kufuneka ihlale ikhutshwe.
Amanani kufuneka abe spelled ngamanani (isb., I-100 iya kulunge, kwaye ikhulu - kungekhona nhlobo).
Nangona idatha ephantsi kwimilinganiselo yokuthunyelwa ngokuqhelekileyo ivela ngokungafihli, ubungakanani bomkhiqizo akumele kube yinto ebalulekileyo (ngokuqinisekileyo, ngaphandle kokuba impawu ezifanelekileyo neziyimfuneko).
Phantse into efanayo malunga nokucacisa umbala-akukho mfuneko yokuba uyidibene kuyo yonke imveliso, kuphela ezo zinto.
Unokuba uqhelanise nale nto, kodwa ndiya kubeka uludwe olufutshane lweengcebiso - ubuncinane ngenxa yokuphelela. Ngoko, xa unqakraza nawuphi na uluhlu lwemveliso kuloo ndawo yemarike egcweleyo - kwaye uhlaselwa ngqo kwicandelo lephepha lewebhu kunye neengongoma zebhola. Ngokusekelwe kwi i-Amazon.com izikhokelo zendawo, qwa lasela ezi zilandelayo ziphakamiso xa ukhetha iipoti zeibhola eziza kufanelana nawe:
Uludwe lweengongoma zebhola kufuneka zakhiwe kunye idatha efanelekileyo kwaye akukho nto enye.
Olunye ulwazi oluchazayo lufakiwe lumele lube luleke kuphela.
Bhala uluhlu lwemveliso emikhulu kunye neenzuzo ngendlela efutshane, ecocekileyo neyocwangcisiweyo.
Imveliso Inkcazo & Izithombe
Phantse yonke into malunga nenkcazo yemveliso kunye nokulungiswa komfanekiso kukuchaza. Yingakho ndiza kukubonisa nje isishwankathelo esifutshane sezinto ezifunyanisiweyo kunye NOKUBA-kufuneka ube neengongoma zokugxininisa:
Imveliso Inkcazelo - isityebi ngamagama angundoqo, ithetha ukuba ukuba yodwa. Ukujongana neengongoma eziphambili zabathengi, inkcazo efanelekileyo yemveliso kufuneka ifake yonke idilesi efakwe ngokupheleleyo kwaye ipheleleyo.
Imveliso yeMifanekiso - kuphela umda wokuba i-Amazon ivumela ukuba zonke izihlomelo zemveliso zifakwe ngaphandle kwezithombe ezongezelelweyo ezithoba. Mhlawumbi akuyikho-brainer, kodwa ndiyakhuthaza ngokucamngca ngokukhethekileyo ukupakisha, indlela yokuphila kunye nokusetyenziswa kwamaphepha emveliso kwansuku zonke - kwaye uyenziwe.